Nepal Dayari | दिउँसाे ब्वाइफ्रेन्डसँग डेटिङ, साँझ सुसाइट नाेट लेखेर आ’त्मह’त्या !
साउन ९, २०७८ शनिबार २९८ पटक हेरिएको
सल्यान । सल्यान शारदा नगरपालिका १ श्रीनगरकी १८ वर्षीय अस्मिता बुढाले सुसाइट नाेट लेखेर आफ्नै घरमा झुण्डिएर आ त्म ह त्या गरेकी छन् । आफ्नाे प्रेमिले धाेका दिएकाे भन्दै उनले साउन २ गते राती सुसाइट नाेट लेखेर आ त्म ह त्या गरेकी हुन् ।
साँझ खाना खाएर सुत्न गएकी उनले घरकाे दलिनमा सलकाे पासाे लगाएर आ त्म ह त्या गरेकाे बताइएकाे छ । यद्यवी पाेस्टमार्टम रिपाेर्ट भने आइसकेकाे छैन् ।
परिवारकाे किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आ त्म ह त्या दु’रु’त्सा न मु’द्दामा अस्मिताका प्रेमी श्रीनगरकै छवि ओलीलाइ प’क्राउ गरेकाे छ । अदालतबाट म्याद लिइ उनलाइ प्र’हरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भैरहेकाे जिल्ला प्र’हरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख डिएसपी गाेविन्द थापाले बताए ।
के भएकाे थियाे त्याे दिन ?
अस्मिता दुइवर्ष अघिदेखि श्रीनगरकै छवि ओलीसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । छविले बैंकमा जागिर गर्थे ।
साउन २ गते शनिबार दिउँसाे अस्मिता साथीहरुसँग घुम्न छत्रेश्वरी गाउँपालिकाकाे शंकमुल गइन । त्यहि दिन लेखपाेखरा गएका प्रेमी छवि अस्मितालाइ भेट्न शंकमुल आए । त्यसपछि उनिहरु शंकमुल पार्कमा फाेटाे खिच्न र गफगाफमा व्यस्त भए ।
दुवैकाे डेटिङ भएकाे भन्दै अस्मिता सँगै गएका साथीहरु उनिहरुलाइ त्यहि गफ गर्न दिएर आफुहरु घर (श्रीनगर) फर्किए ।
‘केटाले अस्मितालाइ फाेन गरेर शंकमुल भेट्न आएपछि हामीहरु अस्मितालाइ उसँग छाेडेर गाडीमा फर्कियाैं ।’, अस्मिताकी साथीले भनिन्, ‘त्यसपछि उनिहरु आधा घण्टा जति त्यहाँ बसेर फाेटाे खिचेर घर (श्रीनगर) फर्किए ।’
घरबाट घुम्ना जाँदा अस्मिताले साथीहरुसँग आफ्नाे प्रेमीले आफुलाइ आजभाेली वास्ता गर्न छाेडेकाे, टाइम नदिएकाे र धाेका दिन खाेजिहरकाे बताएकी थिइन् । तर शंकमुलमा छविसँग भेट हुँदा र फर्किदाँ उनि खुसी भएकाे साथीहरु बताउँछन् ।
अस्मिताकी आमा भन्छिन्, ‘उ फर्किदाँ हाँसिखुसी थिइ, साँझ उसकाे प्रेमीले टर्चर दियाे हाेला, अनि आ त्म ह त्या गरेकी हाे ।’ आफुले पहिला त्याे केटा राम्राे हाेइन उ सँग प्रेम नगर भनेर सम्झाएकाे आमा बताउँछिन् ।
सुसाइट नाेटमा अस्मिताले लेखेकी छन्, ‘ममी तिमीले भनेकाे ठिकै थियाे, छविसँग लभ नगर भनेकाे तर म नसुनेर छविसँग लभ गरे, त्यसलाइ माया गरे तर मलाइ आज याे अवस्थामा लिएर छाड्याे ।’
अस्मिता घरकी एक्ली सन्तान हुन् । खकेन्द्र केसिले लेख्नुभएको समाचार पोस्ट पाटि डटकम बाट साभार गरिएको हो ।